🏡 gburugburu akụkọ ihe mere eme omenala | Gaa na Hultsfred
Gburugburu omenala-akụkọ ihe mere eme bụ gburugburu ndị mmadụ metụtaworo ma kpụzie ya. Site na gburugburu na ụlọ ndị a, a na-eme ka akụkọ ihe mere eme nke ndụ mmadụ pụta ìhè.
Ụka Vena bụ otu n'ime nnukwu ụka mba dị na dayọsis Linköping. Site ná mmalite, chọọchị ahụ na-anabata ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mmadụ 1200. Mgbe ole na ole mweghachi mgbe e weere oche
Hultsfred Church, obodo kasị ukwuu na obodo, nwere n'ezie ọdụdụ nwa ụka. Atụmatụ nke iwu ụka na Hultsfred adịla adị nwa oge ma na 1921 ka emere ya
A na-ewu ụlọ ụka Virserum n'ụdị neo-Gothic nke nwere njirimara dị elu ma nwee windo na ọnụ ụzọ windo. E wuru ụka Virserum ugbu a n'afọ 1879-1881. Na
Nwee mmetụta nke ịnya ụgbọ ala ụgbọ ala na-acha odo odo na-acha odo odo nke na-eku ume 50s n'etiti Virserum na Åseda. Kporie gburugburu gburugburu ma nwee kọfị asaa
Ụzọ dị warara nke Hultsfred-Västervik dị kilomita 7 n'ogologo na 891 milimita n'obosara, si n'oké ọhịa nke Småland dị n'ebe ọdịda anyanwụ, ọdọ mmiri ndị gara aga, obere obodo na ọrụ ugbo ruo n'akụkụ ọdịda anyanwụ.
N’osisi nke Björkmossa, enwere obe osisi nke e dere na “A na m edina, hie ura, anaghi anwu, Onye nwe anyi gbaghara nmehie ndi ahu
Mkpụrụ aka akwụkwọ mpempe akwụkwọ
Dabere na akwụkwọ ọgụgụ nke Museum Museum 2014, Fröåsa bụ nke kacha ochie echekwara na Sweden. Ya mere, njem a bụ maka ọdịmma mba. Fröåsa handpappersbruk bụ ụlọ ọrụ izizi mpaghara ahụ na 1802.
Albert Engström bụ otu n'ime ndị ọdịnala kachasị ukwuu na akụkọ ntolite Sweden. Ọ bụ onye na-ese ihe, onye edemede na onye na-ese foto. A mụrụ Albert na May 12, 1869 na ugbo
Rlọ ahịa Fröreda
Fröreda Storegård site na narị afọ nke 1700 bụ otu n'ime ihe ncheta ụkpụrụ ụlọ nke Kalmar County. Ugbo ala ahụ na ọnọdụ ụlọ ya ejidere nke gosipụtara omume obodo Sm aland na-akọ ugbo site na narị afọ 1700
Olulu wolf na Slättemossa
Granite dị okirikiri bụ nnukwu nkume etinyere n’ime mmiri miri emi wee rute n’elu ala n’oge akụkụ ụwa. Slättemossa bụ naanị ebe
Målilla usoro ihe omumu
Ihe omumuihe a na aru oru n’agbata 1907 na 1991, echekwara ya na akuku ya n’ime ime ya. Taa, ndị otu ime obodo nwere nkuzi maka nlekọta igwe
Chọọchị Lönneberga dị mma nke ukwuu, n'elu ugwu ebe ọhịa mepere, ihe dị ka kilomita 6 site na obodo Silverdalen na Lönneberga. Chọọchị dị ugbu a
Ihe ngosi Rätt & Slätt
The ngosi Rätt & Slätt, na-eche na ájá si puku kwuru ji aga akpụkpọ ụkwụ na moo. Legharịa anya ma hụ otú mbara ugwu ahụ si buo ibu. Ihe ngosi banyere ndu
Ala ili na Långeruda
N'etiti Långeruda na Ekeflod dị n'èzí Virserum bụ nnukwu ili asaa nke Iron Age. Ebe ili ozu dị na ala dị larịị n’agbata obodo Långeruda na Ekeflo ma tinye ili asaa.
Ala ili na Järeda
Ebe a na-eli ozu nwere okwute abụọ na ntọala nkume atọ, nke emere n'oge Iron Age. N’otu n’ime ikpo nkume ahụ, e nwere otu nkume dị ihe karịrị mita abụọ n’ogologo na atọ
Fornborg na Blaxhult
Na Blaxhult enwere nnukwu ụlọ ochie site na Iron Age na n'ugwu dị n'okpuru ugwu ahụ bụ olulu anọ, nke kacha ochie sitere na Neolithic. N’otu n’ime ili
Björneström na Näcken
Obodo Björneström bịara dịrị na igwe nri. Ọ bụ mgbe ahụ ka Virserumsbygden na-arụ ụlọ banyere arịa ụlọ pụta n’oge ngwụcha narị afọ nke iri na itoolu. Society gosipụtara ntụgharị nke narị afọ.
Ejiri Äspebäcken croft na Venabygden na eserese nke Soldier nwere agbaji agbaji. Carl Olof Nordenberg dị afọ 35 mgbe ọ bịara Vena na 1856. Na
Igwe ihe ubi Dalsebo
E weghachiri Dalsebo windmill nke ọma ma ugbu a nwere ebe ngosi nka. Obodo Dalsebo dị na mbara ala nke nwere ubi na sistemụ okporo ụzọ ndị yiri ya
Obodo Visböle na-enweghị nsogbu bụ obodo na-ahụkarị site na mpaghara ndị ọrụ ugbo nke narị afọ nke 1700. E wuru ụlọ ndị ahụ dịka nnukwu ụlọ elu abụọ dị nso na ibe ha n'otu ugwu na n'etiti ha